Ny tsy fananany ilay taratasy manamarina ny fijoroan’ny antokony ara- dalàna na ny nanoloran’ireo olom-boafidy miisa 150 azy ho kandidà no antony, araka ny fanazavany tamin’ny mpanao gazety omaly ka aleony miandry amin’ny manaraka indray. Na izany aza anefa dia tsy hijanona hatreo ny fikambanana fa eo am-pitadiavana vahaolana mihitsy. Anisan’ny hisantarany izany ny fitetezam-paritra nanomboka omaly hametrahany ny antokony isam-paritra ahafahany manana olom-boafidy maro toy ny solombavambahoaka afaka hanolotra azy ho filoha amin’ny fotoan’androny. Nomarihin’ny filoha nasionalin’ny HAFARI fa tsy manohana kandida hafa izy ireo hatreto. Miisa 16 ireo kandida efa nihaona sy nifanatona taminy saingy tsy mbola nanaiky hanatanteraka ilay rafitra fokonolona entina hampandrosoana ny firenena takiany hatreto. Ny 20 aogositra ho avy izao no fe-potoana farany napetraky ny teo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) hametrahan’ireo kandidà ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana